1,100 Oo Muhaajiriin ah Oo Lagasoo Bad-baadiyay Badda Mediterranean-ka. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Roma(FMN)—In kabadan 1,100 oo muhaarijiin ah ayaa lagasoo bad-baadiyay badda Mediterranean-ka kadib markii ay qalibmeen doomo baca-kasamaysan oo ay la socdeen.Doomahaas ayaa tiradooda lagu sheegay 10 xabbo oo baco kasamaysan iyo hal mid oo alwaax ah.
Howl-galkan oo ay sameeyeen ciidamada badda ee dalka talyaaniga oo adeegsanaya maraakiibta ciidankooda ilaalada badda qaabilsan, ayaa ku guulaystay in ay dadkaasi soosamatabixiyaan.Dadka lasoo bad-baadiyay waxaa ku jirta haweenay ilmo ku dhashay doonta dhexdeeda intii ay kuguda jireen tahriibka badda.
Tiro tahriibayaal Afrikaan iyo carab ah oo kor u dhaafaysa 114,600(boqol toban iyo afarkun iyo lix boqol) oo qof ayaa sanadkan oo kali ah ku guulaystay in ay cagaha dhigaan xeebaha dalka talyaaniga sida ay qortay wakaalada wararka ee AFP.
Si kastaba ha ahaatee,arintan ayaa kusoo aadaysa xilli aad looga deyrinayo xaaladda tahriibayaasha afrikaanka ah ee ku sugan dalka liibiya.Iyada oo ay dhawaan soo ifbaxeen cadaymo muujinaya adoonsi cusub oo lagula kacayo dhalinyaradaas oo ka bilaawday dalka Liibiya.
Previous Previous post: Guddoomiyihii Lagaaday!-Maqaal.W/Q:-Cabdirisaaq Macalin Cilmi
Next Next post: Natiijada Baadhitaanka Qaraxii Zoobbe Oo Mar Kale Lasoo Bandhigay.